ဆရာတော်၏မိတ်ဆက်ခြင်း - ကျန်းမာပျော်ရွှင်သောဘဝအတွက် ဗောဓိ တရားအားထုတ်ခြင်း
ဆရာတော် ဂျင်ဗောဓိကို 1964 ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ငယ်စဉ်ကာလမှစ၍ ဆင်းရဲချို့တဲ့ပြီး နာမကျန်းမှု ဒုက္ခဝေဒနာများဖြင့် ကြီးပြင်းခဲ့ရသည်။ ဆရာတော်သည် ကင်ဟိုင်း-တိဗက် (Qinghai-Tibet) ကုန်းမြေမြင့်တွင် သမားရိုးကျ ဒဿနနှင့် တရားပွားများမှုတို့ကို 18 နှစ်ကြာ လေ့လာခဲ့ပါသည်။ စိတ်နှင့် ခန္ဓာ ကျန်းမာသန်စွမ်းမှု ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ရုံသာမက အခြားသူများ၏ ရောဂါနှင့် ဒုက္ခဝေဒနာများကို သက်သာပျောက်ကင်းနိုင်စွမ်းကို လည်း ရရှိခဲ့သည်။ .
ရောဂါနှင့် နာကျင်ခံစားမှုဖြင့် ဒုက္ခရောက်နေသူအားလုံးအတွက် ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်မှု ဆောင်ကြဉ်း ပေးနိုင်ရန်၊ စိုးရိမ်လောကများဖြင့် ဖိစီးမှုခံနေရသူများအတွက် ငြိမ်းချမ်းမှုပေးဆောင်ရန်နှင့် အလွန်ဆင်းရဲ ချို့တဲ့သူများအတွက် ချမ်းသာသုခ ယူဆောင်ပေးရန်တို့အတွက် ဆရာတော် ဂျင်ဗောဓိသည် ဗောဓိ တရားစခန်းကို 1991 ခုနှစ်တွင် ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဆရာတော်သည် ဘေသဇ္ဇ ဂုရုဗုဒ္ဓ၏ မဟာ အဓိဋ္ဌာန် 12 ချက်ကို ကောက်နုတ်ပြီး ဝေနေယျသတ္တဝါများလွတ်မြောက်ရန် ခရီးတစ်ခုလျှောက်လှမ်းလျက် ဗောဓိ တရားစခန်း၏ ကျင့်ကြံပွားများမှုများကို သင်ပြမှု စတင်ခဲ့ပါသည်။.
ဆရာတော် ဂျင်ဗောဓိသည် ပထမ ခုနစ်နှစ်ကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပြသပေးခဲ့ပြီး လူသန်းပေါင်းများစွာတို့အထိ ရောက်ရှိစေခဲ့ပါသည်။ 1999 ခုနှစ်တွင် ဆရာတော်သည် ကနေဒါနိုင်ငံသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီး 2005 ခုနှစ်တွင် Vancouver မြို့၌ သင်ကြားပြသမှုစတင်ခဲ့ပါသည်။ ယနေ့ကာလတွင် ဆရာတော် ဂျင်ဗောဓိ၏ သင်ကြားမှုများသည် ကနေဒါ၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ထိုင်ဝမ်၊ ဟောင်ကောင်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဂျပန်၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ ရုရှ၊ ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်၊ စပိန်၊ အီတလီ၊ ဆွီဒင်၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ဂျာမဏီ၊ နယ်သာလန်၊ ရိုမေးနီးယား၊ သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်၊ ဘရာဇီး၊ ပီရူးနှင့် တောင်အာဖရိကတို့အပါအဝင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ နိုင်ငံနှင့် ဒေသပိုင်း 30 ကျော်သို့ ပျံ့နှံ့နေပါသည်။ ဆရာတော် ဂျင်ဗောဓိသည် ဒုက္ခဝေဒနာမှ လွတ်မြောက်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ရေး ရရှိစေရန် မရေတွက် နိုင်သော လူသားများကို ကူညီနေသည့် ကနေဒါ၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ထိုင်ဝမ်၊ ဟောင်ကောင်၊ တောင် ကိုရီးယား၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊စင်္ကာပူစသည်တို့တွင် ဗောဓိဓမ္မရိပ်သာကဲ့သို့သော အကျိုးအမြတ်မယူသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ကို ထူထောင်ထားပါသည်။.
ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါစို့ : “ရှုထောင့်မြင်ကွင်းမှ ဗောဓိ”
ကျွန်ုပ်ဘဝ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ကျွန်ုပ်၏ သင်ကြားပြသမှုများ ပန့်ပွားစေခြင်းဖြင့် ဘေသဇ္ဇ ဂုရုဗုဒ္ဓ၏ မဟာ အဓိဋ္ဌာန် 12 ချက်တို့ကို နားလည်သဘောပေါက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဘေသဇ္ဇဂုရုဗုဒ္ဓ၏ အဓိဋ္ဌာန်များကို ကျွန်ုပ် ကိုယ်ပိုင်အဖြစ် ချမှတ်ကျင့်သုံးရန်ဖြစ်ပြီး ဘေသဇ္ဇဂုရုဗုဒ္ဓ၏ ကြီးမြတ်လှသော အကြံအစည်တော်ဖြစ်သည့် ဝေနေယျ သတ္တဝါအားလုံးကို ကူညီကယ်တင်မှု ဖြစ်ပေါ်လာစေခွင့်ပြုရန် ဖြစ်ပါသည်။ .
—— ဆရာတော် ဂျင်ဗောဓိ